February 15, 2017 Mohammad Ibrahim
डिला मगर (फातिमा)
म पहिले हिन्दू घरनामा जन्मिए, मेरो श्रीमानले ईसाई धर्म लिएको हुनाले मैले पनि १९ वर्ष पहिले ईसाई धर्म लिएकी थिए। मेरो श्रीमानले तिन वर्षसम्म ईसाई धर्मको तालिम लिएर हाल ईसाई धर्मका पास्टर (Pastor) हुनु हुन्छ। जब म ईसाई थिए मैले पनि ईसाई धर्मको खुब प्रचार-प्रसारमा गरें। म नेपालमा हुँदा खेरी नै इस्लाम धर्मालम्बीहरुले एक अल्लाह मान्दछन्, रोजा राख्छन्, नमाज पढ्छन् र हज़्ज़ गर्न साउदी अरब जान्छन् भन्ने थाहा थियो। मैले ईसाई धर्म लिएको केही वर्ष देखि बिरामी हुन थाले, मैले श्रीमानलाई भने मलाई उपचार गर्नुहोस् । तर वहाँले मात्र यति भन्नु हुन्थ्यो तिमी परमेश्वर (यशू) माथि भरोषा गर, उनैले तिम्रो विमार ठिक गर्नु हुन्छ, तिमी प्रभुको प्रार्थना पुकार गर ठिक हुन्छ धैर्य गर, भन्नु भयो तर मलाई बिमार ठिक हुनुको सट्टा झन् म बिमारी हुँदै गए र म बहुलाएर अर्ध चेतन अवस्थामा खोलाको किनारमा गएर पानी मात्र पिएर बस्न थाले। मैले एक दिन सोचें म पनि अब अल्लाहलाई मान्छु उनैले मलाई निको पार्नु हुन्छ । जब मैले मुस्लिम धर्म मान्छु भने तब मेरो बिमार निको भयो तर मेरा घरका सबै जना विरोधी भए। मेरो एउटा बहिनी ओमानमा बस्थिन उनले इस्लाम कबुल गरेको दश वर्ष भई कसेको थियो र मेरो दाजुले इस्लाम धर्म लिएको एघार वर्ष भएको थियो। उनीहरुको प्रेरणा अनुसार मैले इस्लाम धर्म लिने अठोट गरे। तर त्यो सबै नेपालमा बसेर गर्न आफुलाई असुरक्षित ठाने। म फेरी कुवैत आए, अब म ढुक्क छु, मलाई कसैले केही गर्न सक्दैनन् भनेर मेरो दाजु जो साउदीमा हुनुहुन्थ्यो वहाँको सल्लाह अनुसार कुवैतमा नेपाली शेख हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर इस्लाम कबुल गर्नु त्यहाँ पनि सिक्नु र नेपाल आएपछि म सिकाउँछु भन्नु भयो। तब मैले मेरो साहुनीलाई इस्लाम धर्म मन परेको छ म इस्लाम धर्म लिन चाहन्छु भने, उनीहरुले इस्लाम प्रेजेन्टेशन कमिटी कुवैतमा कल गरी तपाई (मुहम्मद ईब्राहीम) लाई बोलाएछन् । अब म तपाई समक्ष इस्लाम कबुल गर्न चाहन्छु।
मैले सोधेः तपाईलाई इस्लाम धर्म र तपाईले मानि आएको पहिलेको धर्ममा के फरक पाउनु भयो ?
फेरी मैले सोधेः इस्लाम धर्ममा कुन चीजले तपाईलाई सबै भन्दा धेरै आकर्षण गर्यो ?
नेपालका एक ईसाई पास्टरकी श्रीमति इस्लामको शरणमा